China BOPP ibhegi HC-01 abavelisi kunye nabathengisi | Hengrong
PP bag ephothiweyo
Ububanzi: ukusuka kwi-30cm ukuya kwi-100cm
Phezulu: ukusika amaza, ukujikeleza, umbane we-ultrasonic,
Ngezantsi: ukugoba okukodwa / ukuthunga okungatshatanga okanye kabini, ukuphinda kabini / ukuthunga okungatshatanga
Ubunzima belaphu: ukusuka kwi-45gsm ukuya kwi-150gsm
Ukusetyenziswa: isanti, iswekile, ukutya kwaselwandle, isichumiso, isamente, njl.
Inzuzo: ixabiso lokukhuphisana, umgangatho ophezulu, ukulungelelaniswa kokupakisha iimpahla
Mhlophe, bomvu, tyheli, luhlaza okwesibhakabhaka, nganto okanye njengombala oCwangcisiweyo
Ubushushu Sika, cut ebandayo, wave wave okanye hemmed
a. Ukudibanisa kunye nokungatshatanga
b. Phinda kabini kwaye ungatshatanga
c. Phinda kabini kwaye uthungelwe kabini
PP ezinepolypropylene ephothiweyo ibhegi
9 × 9,10 × 10,12 × 12 njengemfuneko sakho
Unyango lwe-UV, ubungqina bamanzi, ubungqina bokuvuza, ubungqina bothuli
Uyilo / Ushicilelo
1. Ukwaleka & neebhegi Plain: Max. 5mibala
2. Iingxowa zefilimu ze-BOPP: UMax. Imibala eli-10
Isiliphu esichasayo okanye esicacileyo okanye esilaminekileyo / esidibeneyo
Ukupakisha irayisi, umgubo, ingqolowa, ukutya, izichumisi, i-walnut, iitapile, iswekile, i-almond, isanti, isamente, imbewu, njl
Ixabiso elikhuphisanayo, umgangatho ophezulu, ukulungela ukupakisha iimpahla
Yoshicilelo umbala (BOPP) ibhegi ephothiweyo ikwabizwa ngokuba ibhegi yenyoka, impahla eluhlaza ngokubanzi polyethylene, ezinepolypropylene kunye nezinye izinto zeplastiki imichiza ekrwada, luhlobo lweplastiki, kwaye non-ityhefu kwaye nasongo, ingozi emzimbeni womntu ngokubanzi encinci, nangona yenziwe ngohlobo lweplastiki yamachiza, kodwa ukhuselo lwayo lokusingqongileyo lomelele, kwaye ukubuyiswa kukhulu. Kwimeko yendawo yanamhlanje yezorhwebo, amashishini ahlukeneyo abekwe kwingingqi, ke ukuthuthwa okude kuye kwaba yinto eqhelekileyo, abavelisi bafuna izinto zokupakisha ezinje ngeebhegi ezilukiweyo ukuqinisekisa ukuba imveliso ayonakalanga kwinkqubo yothutho, ukubonelela ngemveliso esemgangathweni yokuthengisa. .
1, yoshicilelo umbala impahla ibhegi na ezinepolypropylene PP.
2. Isetyenziswa ikakhulu kwilayisi, ekutyeni, kwisichumisi nakwamanye amashishini.
3, Ukucaciswa: 30cm-75cm ububanzi, inokugoqwa M ngohlangothi, ubude obungenamkhawulo, ukushicilela umbala, ukupeyinta okanye ukuprinta okuqhelekileyo.
4, ukusebenza kunye eziluncedo: kunye neempawu amandla aphezulu, ukumelana amanzi elungileyo, inkangeleko entle.
5, ukwenziwa kwezinto ezingavuthiyo: i-polypropylene PP, ifilimu yokuprinta umbala ye-OPP, ifilimu yealuminiyam kunye nezinye izinto.
Zithini izibonelelo zeebhegi zethu ezilukiweyo eziqhelekileyo?
Okokuqala, ngokombono wemveliso, njengakule teknoloji yemveliso ivuthiweyo, abantu bayakufumanisa ukuba iya isiba ngakumbi kwaye ibe lula ngakumbi itekhnoloji yokuvelisa, kusetyenziswa itekhnoloji yokuvelisa kunye nokuveliswa kwemveliso ekrwada nayo ilula kakhulu, iindleko zemveliso zokwenziwa Ukulungiselela yonke imveliso ifumene ulawulo oluhle kakhulu, ikwavumela olu hlobo lwemveliso emva kokungena kwintengiso yentengiso inexabiso eliphantsi kakhulu, Oku kuphucula ukusebenza kweendleko zokupakishwa kwemveliso, esisinye sezibonelelo zeebhegi ezilukiweyo.
Okwesibini, ngokwembono yokusetyenziswa, nokuba yeyiphi ingxowa yeplastiki ephothiweyo esiyisebenzisayo ngoku, into ethile, ubunzima bokupakishwa ngokwayo bulula, kufanelekile kwimveliso ezininzi zokupakisha, ngaxeshanye, ezinje ukuphakheja kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona. Ukupakishwa kweemveliso ezininzi esizibonayo okwangoku kunokuhlala ixesha elide kwaye akukho lula ukonakala. Ngale ndlela, ilahleko eveliswe kwinkqubo yokusetyenziswa iya kuncitshiswa.
Egqithileyo Umbala omhlophe ibhegi ephothiweyo WB-28
Okulandelayo: Ingxowa yeBOPP HC-02
22 Lbs Pet Ukutya Bopp Bag
50kg Sack ephothiweyo
Kk ephothiweyo Bag
Kk ephothiweyo Bag Bulk
Kk ephothiweyo iingxowa
Ngaphaya Bag ephothiweyo
ingxowa yesanti yombala oluhlaza ngombala okanye ngaphandle kwe-WB-4
Red ibhegi ephothiweyo irayisi umbona iimbotyi zesoya kunye neenkozo W ...
Blue kunye eluhlaza ibhegi ephothiweyo kunye ukuzoba for ric ...
Itywina elishushu lokutya kwiBakala 25kg 50kg PP ephothiweyo